Android 10 dị ugbu a na beta maka OnePlus 6 na OnePlus 6T | Gam akporosis
Android 10 dị ugbu a na beta maka OnePlus 6 na OnePlus 6T
Kemgbe Septemba 3 gara aga, nsụgharị ikpeazụ nke gam akporo 10 adịlarị maka ihe ngwanrọ gam akporo niile nke ọchụchọ ahụ, ya bụ, Google Pixel. Site na ụbọchị, oge ọ bụla ha bụ ụlọ ọrụ na-akpọsa ụbọchị ị ga-ewepụta nke mmelite maka ọdụ gị.
Nke mbụ, ị ga-agabiga usoro beta, oge beta nke na-adịkarị ntakịrị karịa otu ọnwa n'ọtụtụ ọnọdụ, tupu ịmalite ụdị nke ikpeazụ. Onye oru ikpeazu gha meghe beta nke gam akporo 10 maka ufodu uzo ya bu OnePlus site na OnePlus 6 na OnePlus 6T.
E gosipụtara ọnụ abụọ ahụ na nkeji mbụ na nke ikpeazụ nke afọ gara aga, n'agbanyeghị eziokwu ahụ yiri ka ha anọworị n'ahịa ruo ogologo oge. N'ime awa ole na ole, ịnwere ike ịwụnye beta mbụ nke gam akporo 10 maka ma ọnụ. Naanị otu afọ na ahịa, echere ka emelitere ya na gam akporo 10, ya mere, ozi a ekwesịghị iju onye ọ bụla anya, ebe ọ bụ na mgbakwunye, onye nrụpụta a bụ otu n'ime ndị na-agbatị mmelite nke ọdụ ya kachasị ogologo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ budata gam akporo 10 beta maka OnePlus 6 ma obu OnePlus 6T ị nwere ike ime ya ozugbo na nnọkọ OnePlus. Bụ beta, ma nkwụsi ike nke usoro ahụ na arụmọrụ nke ụfọdụ ọrụ nwere ike ọ gaghị ezu, yabụ na ị ga-eburu n'uche tupu ịwụnye ya.
Beta a adịghị site na OTA, yabụ ị ga - eme ya ibudata ma wụnye nsụgharị a na aka Site na kọmpụta ma ọ bụ iji ihe nrụnye nke OnePlus na-enye anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ya site na ngwaọrụ ahụ. Nke ahụ bụ, na mbụ, mee nkwado ndabere nke ọdịnaya niile ị nwere mmasị inwe ike ịgbake ma ọ bụrụ na nrụnye usoro ada ada. Usoro a anaghị adaba n'ọtụtụ ọnọdụ, mana enwere ike ịme mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Android 10 dị ugbu a na beta maka OnePlus 6 na OnePlus 6T
Nokia tinyere ihe karịrị puku abụọ na nchọpụta abụọ 2.000G
Gaa njem gburugburu ụwa iji mara ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme nke mba ọ bụla na Exactamundo: World Trivia Tour